LOCK DOWN INOBATSIRA SEI PAKUMISA DENDA RECOVID-19 – Kumakomo Community Radio Station
by Sydney Mangweka April 08, 2020 1179
Zimbabwe, nedzimwe nyika dzakatikomberedza nedzemhiri kwamakungwa dzakatora chidanho chokumborega kuenda kumabasa (lockdown) zvichitevera kupararira kwechirwere cheCoronavirus (COVID 19). Zvitoro, zvikoro, nzvimbo dzokudyira namabhizimusi zvakakurudzirwa kuvharwa, ruzhinji ruchitarisirwa kugara mumisha yavo kuedza kuderedza nokumisa kupara kwechirerwe cheCOVID 19. Chirwere cheCOVID 19 chinounza matambudziko mukufema nechikosoro chakaomarara.
Vanamazvikokota vezveutano navanamazvikotokota mukutsvaga zivo dzezvehutano havasati vawana mushonga unokwanisa kurapa chirerwe cheCOVID 19. Nokudaro bazi rezvehutano reWorld Health Organisation rakayambira nyika dzose pasi rose kuti nzira imwe chete yoga ingaedza kubatsira padambudzika redenda iri, kurega kusangana soruzhinji, (avoiding social contact). Naizvozvo (social distancing) kusasangana kworuzhinji kunotarisirwa kudzora kutapuriranwa kwechirerwe cheCOVID 19. Nyika dzagara dzinematambudziko ekushanda kwezvehutano dzinosanganisira Zimbabwe dzinowanawo mukana wakakurama nekupunyuka kubva mudambudziko rechirerwe ichi wakakura.
Mubvunzo mukuru maererano nelockdown, ndewekuti zvino kusasangana soruzhinji (social distancing) kungabatsira chii pakuderedza uye kumisa denda reCOVID 19?
Chinangwa chelockdown, chakaongororwa neImperial College London COVID 19 Response Team, ndechekuti kubereka kwehutachiwana hweCOVID 19 kuderere, kuderedza ruzhinji rwavanhu vanovhenekwa vachiwanika nechirerwe ichi. Danho relockdown, rinotarisirwa kushanda muzvikamu zviviri zvinoti ‘kuderedza’ (Mitigation). Uku kuderedza kutapurirana, zvisingarevi kuti, chirwere chinomiswa kupararira kwacho zvachose. Asi zvinotarisirwa kuti chisave nekutapurirwana kwakanyanya zvinouraya ruzhinji. Kuderedza kutapurirwana kweCOVID 19 kunoitika chete nekubvisa vane zviratidzo zvinoenderana nechirwere che COVID 19 munogara ruzhinji.
Zviratidzo zvinooneka pamhunu abatwa nechirwere cheCOVID 19 zvinosanganisira chikosoro, kunzwa kutsva nekutonhora panguva imwe chete (fever), kuneta, kunzwa kukakata pahuro, uye kuve nedambudziko pakufema kana chirwere chakomba. Naizvozvo pachikamu chekuderedza kutapurirwana chechirwere cheCOVID 19, vanovhenekwa vaine zviratidzo zvedenda iri vanotorwa vachiiswa munzvimbo dzakagadzirirwa kuvaongorora vachipiwa rubatsiro. Nzimbo idzi munyika yedu yeZimbabwe dzinosanganisira Wilkins Hospital neBeatrice Infectious Hospital nedzimwe dziri munzvimbo dzakasiyana munharaunda dzose dzemu Zimbabwe.
Danho repiri, nderekumisa zvose (suspension). Iri danho resuspension rine chinangwa chekudzorera pandaramo yavanhu yakare nekumisa kukura nekupararira kwechirwere ichi. Naizvozvo, ruzhinji runofanira kumbomira chose chinoita pave nekusangana kwakawanda, zvinosanganisira kuenda kuzvikoro, kumabasa uye kuenda kumakereke nezvimwewo.
Zvakaongororwa kuti munhu abatira chirwere cheCOVID 19 anotora kubva pakati pamazuva anoita maviri kusvika pamasondo maviri kuti aratidze kuti abatwa nechirwere ichi. Naizvozvo, lockdown inobatsira kuti uyo abatira chirwere asingazivi kuti anacho akagara kumba asingafambi fambi, mukana wake wekutapurira vamwe unoita mushoma. Naizvozvo, anenge anzwa sekuti aita zviratidzo zvedenda iri anokwanisa kubata zvezvehutano vanouya kwaanege ari vachizomupa rubatsiro. Munguva yelockdown, hurumende nebazi rezvehutano vanogona kuwana mukana wekugadzirira zvingadiwa pachinge paita kukura kwedamudziko iri. Danho iri ndiro rakaita kuti nyange nevanoshanda mabasa ekuchengetedza runyararo munyika vanosanganisira mapurisa namasoja vapiwe basa rokupinda mumisha vachisimbisa nekuongorora kuti ruzhinji rwatevedzera danho rekugara mudzimba here.
Nyangwe zvazvo, danho rekugara mudzimba riri danho rakaoma mukudzora chirwere ichi, ndiro danho chete ratiraoneka kuti ringabatsira zvikuru padenda iri. Zvichitevera kumiswa kwemabasa ruzhinji rwakaratidza kutustusmwa nekuchema kuhurumende kuti dai pawanika zano rekuvabatsira kuti varege kuyaura nenzara vari mudzimba. Zvichidaro, mapuririsa eguta reMutare akatorera varimi vanotengesa mumusika weSakubva Market zvirimwa zvavo vakazvipisa. Parizvino bazi rezvehutano, Ministry of Health and Child Welfare, raburitsa mashoko ekuti, munyika ino yeZimbabwe, maongororwa mune vanhu gumi neumwe vanehutachiwana hweCOVID 19 zvichisanganisira vaviri vakashaya nokuda kwechirerwe ichi. Naizvozvo, Zimbabwe inofanira kuramba yakashinga nekutevedzera zviga nezvidanho zvakatorwa namakurukota ezvehutano pasi rose navakuru venyika dzose.